Archdiocese of Mandalay blog: April 2014
အင်းဝရောက်ခြေရာများ - အပိုင်း(၁၀)
အင်းဝရောက်ခြေရာများ - အပိုင်း(၉)
နိဂုံးချုပ် အနေနဲ့၊ နောက်ဆုံး မေတ္တာရပ်ခံချက်တခုကို တင်ပြလိုတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ သာသနာအတွက် ငွေရေးကြေးရေးဘက်က ကူညီ ပံ့ပိုးပေးပါအုံး လို့ပဲ တောင်းဆို ချင်တယ်။ ငွေရေးကြေးရေးဆိုတာ စဉ်းစားစရာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ကျွန်ုပ်လဲ စောစောပိုင်းက ထင်စားမြို့ ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုကျတော့ ကျွန်ုပ် ဘ၀အတွေ့အကြုံကလေးတွေက တမြို့းထောက်ပြ လာနေပြီလေ။ ငွေရေး ကြေးရေးဆိုတာ လူတိုင်း တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရတဲ့ ဘ၀ပြဿနာ သောင်းခြောက်ထောင် ကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါလားဆိုတာကို တဖြည်းဖြည်း သိလာခဲ့တယ်။ ဒီအခက်အခဲ ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တင်ပြလိုတာက ဒီလိုရှိပါတယ်။ အစ်ကိုကြီးရေ။
ဒီအရပ်ဒေသမှာ အချို့လူတွေက ဘာသာသူတွေကို ငွေနဲ့ ကိုင်ပြီး အနိုင်ယူလေ့ရှိကြတာကို မြင်တွေ့ရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသာဝင်တွေဟာ ငွေကြေးရှင်တွေရဲ့ ကျွန်တွေ ဖြစ်သွား ကုန်တာပေါ့ သူတို့ဟာ ဘာသာရေး လိုက်စားခွင့်တွေ ပျောက်ဆုံး ကုန်ကြတယ်။ အပိတ် အပင်ခံကြရတယ်။ ဒီလို ဒုက္ခပင်လယ်ပြင်မှာ ရှိနေကြတဲ့ သူတွေကို ကယ်ဆယ်ပေးဘို့ အစ်ကိုကြီးထံ ငွေရေးကြေးရေး အကူအညီ တောင်းခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြဿနာတခုက ဘာလဲဆိုတော့ - ဒီအရပ်ဒေသမှာ ရောက်နေကြတဲ့ အနောက်တိုင်းသားတွေဟာ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသူတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျကြပြီး မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေကို ဘာသာထဲကို သွင်းကြပေမဲ့လဲ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာဘက်မှာ ဆက်လက် ဂရုစိုက်ပေးမှု အားနည်း နေကြတာကို တွေ့မြင်နေရတယ်။ ဒီတော့ ဒီကလေးတွေ မပျက်စီးစေဘို့ ကျွန်ုပ် ကျောင်းမှာပဲ စုခေါ် ထားရပါတယ်။ ဒီလို အခက်အခဲ ပြဿနာတွေနဲ့ အခြားအလားတူ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရေးအတွက် ငွေကြေး မရှိဘူးဆိုရင် ဘာမှ မတတ်စွမ်းနိုင်ပါဘူး ဒီတော့ ကျွန်ုပ် ယခင်ကာလတုန်းက တောင်းဆိုထားတဲ့ နှုန်းထားနဲ့ လှူတမ်းမယ်လို့တော့ တွက်မထားပါနဲ့ အစ်ကိုကြီးရဲ့မြို့သားစုမှာ ခြိုးခြံ ချွေ တာကြပြီး၊ အစွမ်းကုန် လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ ခွန်အားစိုက်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံ လိုတာ ဖြစ်တယ်။ အခြား အလှူရှင်တွေကိုလည်း စည်းရုံးပေးပါအုံးလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
အထက်က တင်ပြတဲ့ အခက်အခဲပြဿနာတွေဟာ ဘုရားကျောင်းကန်တွေကို တည်ဆောက်ဘို့ထက် ပိုပြီး အရေးတကြီး လိုအပ် နေတဲ့ အကူအညီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်ုပ်လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေက ရိုးရိုး အဆောက်အအုံတွေ အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရား ကိန်းဝပ်စံပ္ပါယ်ရာ ၀ိညာဉ်များကို ပြုပြင် ဆောက်လုပ်ပေးဘို့ ဖြစ်တယ်။ ဆိုတာကို သဘောပေါက် နားလည်စေလိုပါတယ်။
နောက်ဆက်ပြီး ရေးစရာတွေကတော့ အများကြီး ကျန်ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ စာရွက်က နေရာမရှိတော့ဘူး။ အင်း... အီတလီစကားကလဲ ရေးလေ နှေးလေ ဖြစ်လာနေပြီ တကယ် ကိုယ်မတတ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံခြားဘာသာ စကားကျနေတာဘဲ ကိုင်း... နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အဆုံးသတ် လိုက်ချင်တာကတော့ ပါပါတို့ မာမာတို့နဲ့ မြို့သားစုတတွေ အားလုံးကို နှုတ်ဆက်လိုက်ကြောင်း ပြောပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ မြို့ခင်ဌာနက ဆရာသမား ဘုန်းတော်ကြီးများကိုလည်း ကျွန်ုပ်အတွက် မေတ္တာပို့ပေးကြဘို့နဲ့ အခု ရေးသားပေးပို့လိုက်တဲ့ သတင်းစကားတွေကိုလဲ တဆင့် ပြောပြပေးဘို့ အစ်ကိုကြီးကိုပဲ မေတ္တာ ရပ်ခံလိုက်ပါရစေ။ အစ်ကိုကြီးဆီကို ဒီလို ရေးသာလိုက်ရတာ ကတော့ အစ်ကိုကြီးက တစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဂိုဏ်းသား ဘုန်းတော်ကြီးတွေလဲ သတင်းတွေ ရကြမှာပါပဲလို့ မျှော်လင့်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုင်း အကိုကြီးရေ... ကျွန်ုပ်အတွက်လဲ ဆုတောင်းပေးပါ။ အခြားသူတွေကိုလဲ အလားတူ ဆုတောင်းပေးကြဘို့ တောင်းဆိုပေးပါ။ အချစ်များစွာနဲ့ အစ်ကိုကြီးကို နှုတ်ခွန်းဆက်သရင်း...
ဒီ၊ ပေါလ်လို၊ အ(မ်)အေ
သန်လျင်မြို့ပေါ်တွင် စစ်မီးများ ငြိမ်းအေးသွားကြလေပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော် မွန်-မြန်မာတို့၏ ဆက်ဆံရေးများမှာ ပျော့ပြောင်းမှုကို မရရှိကြသေးပေ။ တင်းမာမှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွါးလျက် ရှိခဲ့သည်။ မွန်တို့ စစ်ရေး သာသွားသဖြင့် တန်ခိုးအာဏာသည်လည်း တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး ခြေကုပ်များ ရရှိလာသည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်း မိမိမြို့တို့အရပ် ဒေသများမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရရှိရေးအတွက် စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းပေးကြရသည်။ မိမိမြို့တို့ရန်သူများကို မျက်ခြည်မပြတ် ကြည့်ရှု့ စောင့်ရှောက်နေကြရသည်။
ထိုသို့ နယ်မြေ အေးချမ်းတည်ငြိ်မ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ ကြီးထွားနေချိန်မှာပင် ပြဿနာတခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ သက္ကရဇ် ၁၇၄၅ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံခြား သင်္ဘောခြောက်စင်းသည် သန်လျင် ဆိပ်ကမ်းမြို့သို့ အမှတ်မထင် ဆိုက်ကပ် လာခဲ့ကြသည်။ မြို့တော်လုံခြုံရေးကို အထူးရေးပေး ဆောင်ရွက်နေကြသော မွန်များသည် အဆိုပါ သင်္ဘောခြောက်စင်း အပေါ် သံသယစိတ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် သန်လျင်မြို့သို့ ပဲခူးမှ ရောက်ရှိနေသော ဆရာတော်ဂါလိဇီယားထံသို့ မွန်များက ချဉ်းကပ်ကြ၍ အဆိုပါ နိုင်ငံခြား သင်္ဘော ခြောက်စင်းအား မိမိတို့ ကိုယ်စား စုံစမ်း မေးမြန်းပေးပါရန် တောင်းခံလာခဲ့ကြသည်။
စုံစမ်းသိရှိရသည်မှာ အဆိုပါ သင်္ဘောများသည် သြစတင်းကုမ္ပဏီပိုင် သင်္ဘောများဖြစ်ကြပြီး စကွန်နီဗယ် (Schonenville) ဆိုသူ ပုဂ္ဂိုလ်က ဦးဆောင် လာခဲ့ကြောင်း သြစတင်းကုမ္ပဏီသည် အိန္ဒိယပြည် ဘင်္ဂေါပြည်နယ်မှ ဘန်ဂီဘဇားမြို့တွင် စီးပွားရေး အခြေချ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ၄င်းကုမ္ပဏီသည် အသက်ဆိုင်ရာ ဘေင်္ဂါပြည်နယ် အစိုးရ၏ ပိတ်ပင်မှုခံရသဖြင၊့် ၄င်းတို့သည် ယခုကဲ့သို့ သန်လျင်ဆိပ်ကမ်းမြို့သို့ ဆိုက်ရောက် လာခဲ့ကြကြောင်းများကို လေ့လာ သိရှိခဲ့ကြသည်။ ယင်း သြစတင်းကုမ္ပဏီသည် သန်လျင်မြို့ ၌ နေရာ ချထားလိုကြောင်း တင်ပြလာခဲ့သည်။ အကယ်၍ မွန်တို့ဘက်မှ မိမိမြို့တို့ တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်လျော လက်ခံမှုမရှိခဲ့ပါက လတ်တလော ဖြစ်ပေးနေသော နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုများ အပေါ် ခြေကုပ်ရယူ၍ အင်းဝဘက်မှ စစ်ကူပေးခါ မွန်တို့အား မိမိတို့ တိုက်ယူရမည် ဖြစ်ပြီး၊ သန်လျင်မြို့ ကိုပါ သိမ်းယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သြစတင်းကုမ္ပဏီ ဦးစီးမှူးမှ ဆရာတော် ဂါလိဇီးယားကို တဆင့် ပြောကြားခဲ့လေသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို အစဉ်လိုလား မြတ်နိုးမှု့ထားသော ဆရာတော်ကြီး ဂါလိဇီယားသည် သြစတင်းကုမ္ပဏီ၏ တင်ပြ တောင်းဆိုချက်များ အပေါ် လုံးဝ မနှစ်မြို့ခဲ့ပေ။ မွန်-မြန်မာတို့၏ နိုင်ငံရေးကို ၄င်းတို့အနေဖြင့် ၀င်ရောက် စွက်ဖက်လာပါက ယင်းဒေသတွင် စစ်မီးများ တဖန် ပြန်လည် တောက်လောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ မိမိတို့ ပြုလုပ်လိုသည့် စီးပွားရေးကို အေးချမ်းသာယာသည့် နည်းလမ်းဖြင့် သာလျှင် ပြုလုပ်စေလိုကြောင်း ဆရာတော် ကိုယ်တိုင်ကပင် ၄င်းတို့အား ပဲခူးဘုရင်ထံ ပို့ဆောင်ပေးပြီး တွေ့ဆုံပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပဲခူး ဘုရင်မင်းမြတ်နှင့် မှန်ကန်သော နည်းလမ်းအတိုင်း ကြေအေးစွာ ပြောဆိုခွင့် ပြန်ပြီးမှသာလျှင် ၄င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို နေရာ ချထားစေလိုကြောင်း ဆရာတော် ဂါလိဇီယားသည် သြစတင်းကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အား မေတ္တာရပ်ခံ ပြောဆိုခဲ့လေသည်။
ဆရာတော် ဂါလိဇီယား ပျံလွန်တော်မူခြင်း
သြစတင်းကုမ္ပဏီအဖွဲ့သည် ဆရာတော် ဂါလိဇီယား တင်ပြပြောဆိုချက်များ အပေါ် သဘောတူ လက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဆရာတော်နှင့် အတူ ပဲခူးမြို့သို့ လိုက်ပါသွားခဲ့ကြသည်။ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် စကွန်နီဗဲလ်(၁၄)သည်လည်း မိမိတို့ အဖွဲ့အား လုံခြုံမှုရှိရေးအတွက် လက်နက်ကိုင် နိုင်ငံခြားသား အချို့ကိုပါ တပါတည်း ခေါ်ဆောင် သွားခဲ့လေသည်။
သို့သော် ပဲခူးမြို့သို့ ရောက်ရှိသွားကြသော အခါ၊ သြစတင်းကုမ္ပဏီအဖွဲ့ တို့သည် မိမိတို့ တွေ့ဆုံလိုသော ပဲခူးဘုရင် မင်းမြတ်နှင့် မတွေ့ရှိခဲ့ကြပေ။ ပဲခူးဘုရင်
သမိန်ထောသည် တောအရပ်သို့ ဆင်ဖမ်း တောလိုက်ထွက်နေခိုက်နှင့် ကြုံခဲ့ကြရခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ပဲခူးဘုရင်ကို အချိန် ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြရသည်။ နိုင်ငံခြားသားများ ပဲခူးမြို့တွင်းသို့ ရောက်ရှိလာနေခြင်း၊ ယင်းတို့နောက်မှလည်း လက်နက်ကိုင် တပ်သားများ ပါရှိနေခြင်းတို့သည်။ ပဲခူးနန်းတွင်း၌ စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထိုသို့ သံသယ စိတ်များပွားများ လာနေမှုကို ရိပ်စားမြို့သော ဆရာတော် ဂါလိဇီယားသည် အခြေအနေများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ပေးရန် စကွန်နီဗဲလ်နှင့် အဖွဲ့တို့အား ပဲခူးမြို့မှ အဆောလျင် ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားစေဘို့ ပြောဆိုခဲ့လေသည်။ မိမိ ကိုယ်တိုင် တာဝန်ခံ၍ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်ပင် ယင်းအဖွဲ့အား သန်လျင်မြို့သို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးလိုခဲ့သည်။
(၁၄) Bishop Bigandet in his History of the Catholic Church in Burma, says that de Schonenville and his followers were Danes. Gallo says that they were Dutch from Sermapore.
U Kaung in his “ The Beginning of the Christian Education in Burma 1600-1824” (J.BR.S.,50th Anniversary, 1960.,pg 19) bares his statement on igandet, while in pg 10 of the same publication John L. Christian says Bigandet was mistaken and the expedition was made by the OSTEND Company of Banky Bzar. (Cf Guardian Magazine August 1962. Pg 20.footnote)
ထိုသို့ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာသွားကြချိန်၌ ပဲခူးမြစ်သည်လည်း ဒီရေကျဆင်းချိန် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ယင်းတို့ စီးနင်းလိုက်ပါခဲ့သော သင်္ဘောသည်လည်း သောင်တင်ခဲ့ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ရေကြောင်းခရီးကို စွန့်ခွာလျှက် ကုန်းကြောင်းခရီးနှင့်ပင် သန်လျင်သို့ ပြန်လည်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ပြန်စဉ်အခိုက် တောနက်တခု အတွင်းရှိ မွန်တပ်တို့ချထားသော လုံခြုံရေး ကင်းတဖွဲ့ ဖြင့် တွေ့ ဆုံခဲ့ကြရပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်းတိုက်ပွဲမှာပင် စကွန်နီဗဲလ်နှင့်အဖွဲ့များ အားလုံး ကျဆုံးခဲ့ကြသည်။ အလားတူပင် လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးသော ဆရာတော်ဂါလိဇီးယား ပဲခူးမြို့တွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ဘုန်းတော်ကြီး မွန်ဒဲလီ၊ ဘုန်းတော်ကြီး ဒယ်လ်ကွန်တေ တို့ပါ။ ထို အသက်ဆုံးရှံးမှု့ များ၌ ပါဝင်ခဲ့ရတော့သည်။ သို့ဖြစ်၍ မြန်မာပြည် ကက်သလခ်၏ ပထမဆုံးသော သိုးထိန်းဆရာတော်သည် သာသနာလုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင် မဆောင်ရွက်မီမှာပင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးရာ၌ မိမိ အသက်ကို ပူဇော်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ထွန်းသစ်စ သာသနာ၏ အရိပ်သည်လည်း ကျိုးပဲ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည် ကက်သလခ် အသင်းတော်အတွက် အလွန်ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှု့ကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ပေသည်။ ဆရာတော် ဂါလိဇီးယားသည် မြန်မာပြည် အခြေအနေများကို ကောင်းစွာ သိရှိ နားလည်ပြီး မြန်မာပြည်ရှိ သာသနာတော်ကို မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ပေးလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တပါးဖြစ်သည်။ ဤအသိတရား၏ လှုံ့ ဆော်ချက်များကြောင့် အီတလီပြည်သို့ မိမိကိုယ်တိုင် ကြွမြန်းသွား၍ သက်ဆိုင်ရာ သာသနာပိုင် အကြီးအကဲများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အကူအညီသစ်များပင် လက်ခံ ရရှိလာခဲ့သဖြင့် မြန်မာပြည်သို့ဝမ်းပန်းတသာ ပြန်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မိမိအား အပ်နှင်းလိုက်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် အတူ သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်သစ်များနှင့် သာသနာတော်ကို စတင် ပျိုးထောင်ပေးရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သည့် ခရီးလမ်းစမှာ ရှိနေချိန်ပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဦးဆောင်ပေးမှု့ထက်မြက်ပြီး၊
သာသနာပြုသစ်များအတွက် အားကိုးအားထားရာ ဖခင်ကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကား ငြိမ်းချမ်းရေး ဥယျာဉ်ကြီးထဲတွင် သံသယစိတ်များ ရွာသွန်းချလိုက်သော မုန်တိုင်းတွင်းသို့ ကျရောက်သွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်နှင့် အတူ အီတလီပြည်မှ လိုက်ပါခဲ့ကြသော အားသစ် ဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုပါ အသက် ဆုံးရှံးလိုက်ရပါသဖြင့် ထွန်းသစ်စ မြန်မာပြည်ကက်သလခ် သာသနာအတွက် အထူးပင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ဆုံးရှုံးမှု့ တစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ရပေသည်။
ပဲခူး-သန်လျင်တောစပ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော သတင်းများ သန်လျင်သို့ အဆောတလျင် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်ပွားမှု့ ကြီး၏ မျက်နှာဖုံး သတင်းမှာ မွန်တပ်နှင့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု့ဖြစ်သည်ဟု ကျော်ကြားခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ အဆိုပါ အရေးအခင်းသည် သန်လျင်မြို့ပေါ်ရှိ အနောက်တိုင်းရင်းသားများအတွက်ပါ အသက် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု့များ အဖြစ်သို့ ကူးဆက်သွားခဲ့သည်။ သန်လျင်မြို့ပေါ်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီနှင့် ကိုရင်ကြီးကာပဲလို တို့သည်လည်း သတင်းရရှိကြသည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်း သန်လျင်မြို့ အနီးရှိ ကျေးရွာများသို့ ထွက်ခွာ တိမ်းရှောင်နေကြရသည်။ ထိုကျေးရွာများသို့ ရောက်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှ သာလျှင် မိမိတို့ ဖခင်ဆရာတော်ကြီးနှင့် နောင်တော် ဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးတို့၏ အသက်ဆုံးရှံးမှု့ သတင်းစုံကို ကြားသိရခြင်း ဖြစ်သည်။
သန်လျင်မြို့ ပေါ်၌ မငြိမ်သက်မှု့များမှာ တနေ့တခြား ပိုမို၍သာ ဆိုးရွားလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီနှင့် ကိုရင်ကြီး ကာပဲလိုတို့သည် ကျေးရွာများ၌ ဆက်လက်ခိုလှုံ နေထိုင်ခဲ့ကြရသည်။ တဖန် မွန်တို့၏ နန်းတွင်းကိစ္စများ၌လည်း ပဋိပက္ခများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ပဲခူးသမိန်ထောဘုရင်သည် အုပ်ချုပ်ရေး၌ လစ်ဟင်းမှု့ များပြားခဲ့ပြီး၊ တောလိုက်ဝါသနာ၌ အချိန်ကုန်ဆုံး စေခဲ့သည် သူကိုယ်တိုင်၌က နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးဘက်များ၌ ကျွမ်းကျင်မှု့ နည်းပါးသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် မွန်များသည် သမိန်ထောဘုရင်ကို မလိုလားခဲ့ကြတော့ပေ။
သက္ကရာဇ် ၁၇၄၇ ခုနှစ်တွင် အောက်မြန်မာပြည်ရှိ မွန်တို့သည် စစ်အင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် အထက် မြန်မာပြည် အင်းဝသို့ စစ်ချီတက်ခဲ့ ကြသည်။ အင်းဝ နေပြည်တော်ကြီးမှ မွန်တပ်များကို ပြန်လည် ခုခံ တိုက်ထုတ်လိုက်ခဲ့သဖြင့် မွန်များစစ်ရေးနိမ့်ခါ အောက်မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြရသည်။ ပဲခူးဘုရင်သမိန်ထော ကိုယ်တော်တိုင် စစ်တောင်းမြစ်မှ တဆင့် ယိုးဒယားပြည်-ဇင်းမယ်မြို့သို့ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခါ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံ ခွင့်တောင်းဆို နေထိုင်ခဲ့ရသည်။
၁၇၄၃ ခုနှစ်တွင် ဆရာတော် ဂါလိဇီးယားနှင့်အတူ လိုက်ပါခဲ့ကြသော ဘားရ်နားဘိုက် သာသနာပြုအဖွဲ့ တို့သည် သာသနာလုပ်ငန်းများ ကို တစုတရုံးတည်း အတူတကွ တနှစ်ကျော်ခန့်မျှသာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရသည်။ သို့သော် ယခုမှာမူ သာသနာဖခင်ကြီးကို ဆုံးရှံးရသည့် အပြင်၊ မိ မိမိနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုပါ ဆုံးရှံး လိုက်ရသော ဘုန်းတော်ကြီးနယ်ရီးနီသည် ကိုရင်ကြီးကာပဲလိုနှင့် အတူသာ ထီးထီး ကျန်ရှိခဲ့တော့သည်။ ခရစ်တော်၏ လုပ်သားကောင်း ပီသသော ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီသည် မိမိ အပေါ်၌ ကျရောက်လာခဲ့သော သာသနာ့တာဝန်ကို မဆုတ် မနစ်သော ဇွဲလုံလဖြင့် အစွမ်းကုန် ထမ်းဆောင်လိုသော စိတ်ဆန္ဒကိုသာ ရည်သန်ခဲ့သည်။ တိမ်းရှောင်နေသော ကျေးရွာများ၌ အချိန် မကြန့်ကြာလိုတော့ပဲ သန်လျင်သာသနာသို့ အဆောတလျင် ပြန်လိုခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုသို့ ပြန်သွားရန် အခြေအနေပေးမှု့က အထူးပင် နည်းပါးလျက် ရှိနေသေးသည် သန်လျင်မြို့ ၌ နိုင်ငံရေး အခြေအနေများ ပိုမို ဆိုးရွားနေသည့် အလျောက် ကိုရင်ကြီးကာပဲလိုကိုပင် အန္ဒိယပြည်သို့ ခေတ္တ ယာယီသွားရောက် နေထိုင်ရန် စေလွှတ်ပေးခဲ့ရသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်၌ကမူ နီကိုးဗားကျွန်းသို့သွားရောက် သီတင်းသုံးရန် ထွက်ခွာခဲ့ရသည် သို့သော် မိမိ စီးနင်းလိုက်ပါလာသော သင်္ဘောသည် အစာရေစာ ပြတ်တောက်သွားသဖြင့် မြိတ်မြို့သို့ ခရီး ရပ်တန့်သွား ခဲ့ရသည်။
မြိတ်မြို့သည် ထိုစဉ် အချိန်အခါက ယိုးဒယား လက်အောက်ခံဖြစ်ခဲ့သည် မြိတ်မြို့ ၌ ယိုးဒယားမှ ပြင်သစ် ကက်သလခ်သာသနာပြုများ ရှိခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီသည် မြိတ်မြို့ ရှိ ကက်သလခ် သာသနာတွင် လုပ်ငန်းများတွင် ကူညီပေးရင်း (၈) လကြာမျှ ဆက်လက် သီတင်းသုံး နေထိုင်ခဲ့လေသည်။ စာပေများကို ဆက်လက် လေ့လာ သင်ယူခဲ့သည်။ မြိတ်မြို့ မှ တဖန် အန္ဒိယပြည်-ပွန်ဒါချယ်ရီမြို့ သို့ ၁၇၄၆ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလပိုင်းတွင် ရောက်ရှိခဲ့သည် ပွန်ဒါချယ်ရီ၌ ကိုရင်ကြီး ကာပဲလိုနှင့် ပြန်လည် ဆုံဆည်းခဲ့ကြသည်။
ဆရာတော်ဂါလိဇီယား အုပ်ချုပ်သော ၁၇၄၃-၁၇၄၇ ခုနှစ်များ၏ မြန်မာပြည် ကက်သလခ်သာသနာကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရသော်၊ ဆရာတော်ဂါလိဇီယား၏ အုပ်ချုပ်ရေး သက်တမ်းသည် အလွန် တိုတောင်းလှသည် ဒုက္ခအတိနှင့်လည်း တွေ့ ကြုံ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။ တဖန် ၁၇၄၃ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှ စတင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော ဒေသ နိုင်ငံရေးလှိုင်းဂယက်များသည်လည်း တည်ငြိမ်မှု့ မရရှိပဲ၊ ပိုမို ဆိုးရွားသော အခြေအနေများသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးပေါက်ကွဲမှု့ များ အကြားတွင် စစ်ဘေးဒဏ်များကြောင့် တိုင်းရင်းသား ဘာသာဝင်များ အသက်ဆုံးရှံးရခြင်း၊ အိုးအိမ်မဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း အစရှိသော ဘေးဒုက္ခများနှင့် တွေ့ ကြုံ ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြရသည်။ ဤစစ်ဘေး ဒဏ်ကြောင့်လည်း ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီနှင့် ကိုရင်ကြီး ကာပဲလိုတို့သည် မိမိတို့ သာသနာရိပ်မြုံသို့ အေးချမ်းသော ပြန်လမ်းမရ ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။ သာသနာတစ်ခုလုံးသည် အသက်ဆုံးရှံးမှု့များနှင့် အတူ၊ အအုပ် အထိန်းမဲ့ အခြေအနေများသို့ ဆိုက်ရောက်ရသဖြင့် ဘာသာရေး ကျဆင်းမှု့များကို အထူးခံစားလိုက်ရသည်။
သို့သော် အိန္ဒိယရောက် ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီသည် မိမိစွန့်ခွာခဲ့ရသော သာသနာကို မျှော်လင့်တမ်းတလျှက် ပြန်ရက်များကိုသာ လက်ချိုးရေတွက်ခါ စောင့်မျှော်နေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 4:29 PM
ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီမှ မစ္စတာပီတာ အမ်ဘရိူ့စ် ထံသို့ ပေးပို့စာ (၁၃)
၁၇၄၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၅) ရက်နေ့
ချစ်ရတဲ့ အစ်ကိုကြီးထံ စာရေးလိုက်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်က စပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ သတင်းရပ်တွေကို အားလုံးခြုံငုံပြီး ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇၄၄ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ အတွင်းက ပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ညီတော်တို့နေတဲ့မြို့ဟာ မီးလောင်ကျွမ်းခံခဲ့ရပြီး၊ အတော်ကို ပျက်စီး သွားခဲ့ပါတယ်။ လူတွေ အတော်များများဟာ ဒီစစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားကြရပြီး၊ ညီတော် သီတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ ကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာ (၂) လတာမျှလာရောက် ခိုလှုံ သွားခဲ့ကြရရှာတယ်။ အချို့ ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအနီး တ၀ိုက်မှာ ရှိကြတဲ့ ဘာသာဝင်များရဲ့ နေအိမ်တွေမှာ နေရာ ချထားပေးခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ သူတို့တတွေ အားလုံးလိုလို မိမိတို့ နေရပ်ဒေသကို ပြန်သွားကြပြီဆိုတော့၊ သူတို့ ထွက်ခွာသွားကြတဲ့နေ့က စပြီး ညီတော်မောင်လဲ စိတ်အေးချမ်း သာယာမှု့အပြည့်အ၀နဲ့ နေထိုင်ရပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ ရှိကြတုန်းကဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆူညံ ပူညံသံတွေ၊ ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ ငိုယိုသံတွေ၊ ဒီအသံတွေက နေ့ရောညပါ အသံမဆဲ ဖြစ်ခဲ့တာကိုး။ အခုကျ ပြန်တော့လဲ သူတို့ မရှိကြတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ကြက်သံ ငှက်သံတောင် မကြားရသလောက် ဆိတ်ငြိမ်သွားခဲ့တော့တာပဲ။
(၁၃) Letter of Father Nerini to his brother Peter at Rome. Dated 5th February 1745. Cf “Storia del Cristianesimo nel’ Impero Barmano”. Luigi Gallo. Milano 1862. Vol I pp.213-223
ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက၊ ဘုရင်မင်းမြတ်ဟာ ကျွန်ုပ်ရဲ့ ကျောင်းတိုက်ကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ရောက် ကြွမြန်းလာခဲ့ပြီး ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ကြည့်ရှ့ စစ်ဆေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းတိုက်ဟာ ဥရောပတိုက်မှာ ရှိကြတဲ့ ကျောင်းတိုက်တွေရဲ့ ပုံစံပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီဒေသမှာ ရနိုင်တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းတွေကိုဘဲ အသုံးချပြီး ဆောက်လုပ်ထားရပါတယ်။ ဒီလ အတွင်းမှာဘဲ ဆရာတော်ဘုရားဟာ တောကြို တောင်ကြားမှာ သီးခြားနေထိုင်ကြတဲ့ ကရင်အမျိုးသားတွေရှိရာ ကျေးရွာတွေဘက်စီကို လှေနဲ့သွားရောက် လှည့်လည် ပတ်ရှု့ခဲ့ပါတယ်။ နန်းတွင်းကလာတဲ့ သတင်းအရဆိုရင်၊ တိုင်းပြည်ဟာ ရက်ပိုင်း အတွင်းမှာပဲ ရှုပ်ထွေးစရာ အကြောင်း ရှိနိုင်သေးတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ဆရာတော်ဘုရားဟာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ အားလုံးကို သန်လျင်မှာပဲ စုပြီး သီတင်းသုံးနေထိုင်ကြဘို့ ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ သန်လျင်ဆိုတာက နေပြည်တော်နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ အလျောက် ဘေးဥပဒ်နဲ့လဲ ကင်းဝေးနိုင်တာပေါ့။ နောက်အကြောင်းတစ်ခုက ပြည်တွင်းမှာ ဘေးဒုက္ခ တခုခု ရောက်ရှိလာမယ်ဆိုရင်လဲ ဘုန်းတော်ကြီးတွေဟာ ဘေးလွတ်ရာကျွတ်ရာကို တိမ်းရှောင်နေ ထိုင်နိုင်မယ်လို့ ဆရာတော်ဘုရားဟာ ယူဆမိခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ဆရာတော်ဘုရားဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့က၊ သန်လျင်မြို့ကို ကြွရောက်လာခဲ့တယ်။ ဒီကနေ
ခရီးဆက်လက်ထွက်ခွာဘို့ အားလုံး ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ အခါမှာ၊ သူစီးတဲ့လှေဟာ ဒီရေအကျနဲ့သွားပြီး တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ သောင်တင်သွားခဲ့တယ်။ ဒီလို ဒီရေအကျမှာ သောင်တင်နေတဲ့ လှေဆိုတာက တွန်းချလို့ရတဲ့ ကိစ္စမျိုးလဲ မဟုတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ဘဲ ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ ရှေ့ခရီးစဉ်ကို ဖျက်ပစ် လိုက်ခဲ့ရတယ်။ တချိန်ထဲမှာဘဲဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားပွဲတခုနဲ့လဲ တိုက်ဆိုင်နေခဲ့တယ်။ ဒီ ပွဲတော်အတွင်းမှာ ဆူပူထကြွမှု့တခုခုဖြစ်ပေါ် လာအုန်းမယ်လို့လဲ အများက ဝေဖန် ပြောဆိုနေကြပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပွဲတော်ကြီးလဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့တာ၊ ဘာမျှလည်း မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ပြောဆိုနေကြတဲ့ ကောလဟာလ သတင်းတွေလည်း ပျောက်ကွယ် သွားတော့တာပါ။
မတ်လထဲမှာကတော့ ပဲခူးဘုရင်သစ်ဖြစ်တဲ့ သမိန်ထောဆိုသူဟာ သူ့ထီးသူ့နန်းအတွက် စိုးရိမ်ကြောင့်ကျစရာကလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ စည်းရုံးရေးအသွင်နဲ့ သူရဲ့ လက်အောက်ငယ်သားတွေကို သစ္စာရေသောက်ခိုင်းခဲ့တယ်။
ဒီသစ္စာရေသောက်သုံးမှု့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသာတူတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ ဘာသာရေး ခံယူချက်တွေကို ခိုင်မာမှု့ရှိတယ်၊ မရှိဘူးဆိုတာကို ဆန်းစစ် ခဲ့သလိုပါဘဲ။ လူအနည်းစုကတော့ ဘုရင့်အာဏာကို မလွန်ဆန်ရဲကြလို့ အဲဒီရေကို သောက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီရေကို မသောက်ကြဘို့ သြ၀ါဒမှာ ကျွန်ုပ် ထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီရေကို သောက်ရင် မိမိတို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု့နဲ့ ဆန့်ကျင်ရာကျတယ်။ ဒီရေကို သောက်သူတွေဟာ မိမိတို့ အမှန်တရားအနေနဲ့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘုရားကို စွန့်ပစ်ရာကျပြီး၊ အခြား ဒိဌိမမှန်တဲ့ဘုရား၊ နတ်တွေကို လက်ခံယူရာ ကျတယ်လို့ ကျွန်ုပ်က အမျိူးမျိူး ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာဝင်အချို့ကတော့ ဘုရားပညတ်တော်ကို ကျူးလွန်ရမှာ ကြောက်ရွံ့ ကြလို့၊ တောရွာတွေ ဘက်ဆီကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေခဲ့ကြတယ်။ အချို့ ကျတော့လဲ အဲဒီ ရေကို လာပေးသူတွေကိုဘဲ လာဘ်ပေးပြီး ၀ိနည်းရှောင်ခဲ့ကြတယ်။ အချို့ကျပြန်တော့လည်း တရားရုံးတော်ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်ုပ်ကိုလည်း တရားရုံးတော်ကနေပြီး ဆင့်ခေါ်လိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျွန်ုပ်လဲ တရားရုံးတော်ကို မသွားမီ အမျိူးမျိူး တွေးမိခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်က ဒီရေကို မသောက်ကြဘို့ ဘာသာတူတွေကို ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့၊ ဘာသာတူတွေကလဲ ဘုန်းကြီးက မသောက်ရဘူးပြောလို့ မသောက်ကြတဲ့ အကြောင်းကို တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုခဲ့ကြမှာ ဖြစ်တာကိုး။ အဲဒီတော့ ကျွန်ုပ်ကိုပဲ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးတော့တာပါလို့ တွေးတောမိခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်ရဲ့ တားမြစ်ချက်က ဘုရင်ရဲ့ အာဏာကို ဖီဆန်မှု့ သက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ ကျွန်ုပ်ဟာ အတော်ကို စိုးရိမ်မိခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်လဲ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ထဲကို သွားပြီး ဘုရားသခင်ကိုပဲ အားလုံးကို ပုံအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးပါလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ရုံးတော်ကို သွားနေခိုက် လမ်းပေါ်မှာ ဆုတောင်းရလို့ အတောမသတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ စဉ်းစားမိတယ်။ “အေး မင်းဟာ အခြားသူတွေကိုတော့ မသောက်ရဘူးလို့ ပြောပြီး၊ ဆရာ့အလှည့်တော့ ဖောက်ပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ ဝေဖန်လိုက်ကြမဲ့ အမျိုးတော့”..လို့ တောင်စဉ်းစား၊ မြောက်စဉ်းစားနဲ့ အမျိုးမျိုး ဖြစ်ခဲ့ရ ပါသေးတယ်။
ရုံးတော်ကိုရောက်တော့ ကျွန်ုပ်လဲ မြို့တော်ဝန်အနီးမှာပဲ နေရာယူပြီး ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ရင်ထဲမှာ ဒီသစ္စာရေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သောကစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေဆဲမှာပဲ၊ အဲဒီ သစ္စာရေတွေ သိုလှောင်ထားတဲ့ စဉ့်အိုးကြီးတွေကို မြင်လိုက်ရပြန်တော့၊ ၀မ်းထဲမှာတက်လာတဲ့ အပူလုံးကြီးကတော့ ပြောမပြနိုင်လောက်အောင် ကြီးမားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးကျတဲ့ ရုံးတော်က စစ်ဆေး မေးမြန်းချက်တွေထဲမှာ ဒီသစ္စာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ တခွန်းတပါဒမှ ပါမလာခဲ့ဘူး။ အခြားကိစ္စတွေပဲ ဖြစ်နေခဲ့တာကို တွေ့ ရှိရတယ်။ တခါ နောက်တစ်ရက်ကျတော့ ရုံးတော်က တဖန် ဆင့်ခေါ်ခိုင်း ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာလဲ မနေ့က အတိုင်းပဲ ရင်တမမနဲ့ ရုံးတော်ကို သွားခဲ့ရတယ်။ ဒီတခေါက်မှာတော့ ဒီသစ္စာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ တထစ်ချတွက်ပြီး သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ဟာတော့ ကျောင်းတော်ကို ပြန်လမ်းရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ စိတ်ထဲတွေးပြီး သွားခဲ့ပါတယ်။ မုချဧကန် ဘုရင်အာဏာကို ဖီဆန်သူ တယောက်အဖြစ် အစွပ်အစွဲခံရ တော့မှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ ဘုရင့်အာဏာကို ဖီဆန်မှု့ ပြုလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီသစ္စာရေဆိုတာက ရိုးရိုးရေမှ မဟုတ်တာကိုး။ ဘာသာရေးနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ဂါထာမန္တရားတွေ ရွတ်ဖတ်ပြီး စီစဉ်ထားတဲ့ ရေဖြစ်နေတာကိုး။ ဒါမျိုးရေးကို သောက်ဘို့ ဘယ်လိုမှ လက်ခံ နိုင်ဖွယ်ရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ ကျမ်းစာကိုကိုင်ပြီး သစ္စာဆိုဘို့ ခိုင်းတယ်ဆိုရင်တော့ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုံးတော်ကိုရောက်တော့ ဒီတခေါက်မှာလဲ အထင်နဲ့ အမြင် တခြားစီ ဖြစ်ကုန်ပြန်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တစ်ယောက်တော့ တရားတော်အတွက် အသေခံဘို့ မထိုက်တန်သေးပါလားလို့ သိခဲ့ရတယ်။ ရုံးတော်ကတွေ့ လို့ မေးမြန်းလိုတဲ့ ကိစ္စကတခြားစီဖြစ်နေခဲ့ တယ်။ ဒ့ါအပြင် ရဟန်းဂိုဏ်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုရင် ဒီလို သစ္စာရေမျိုး သောက်ဖို့ မလိုအပ်ဖူးလို့ ဆိုတာကိုလဲ သိရှိခဲ့ရတယ်။ အဲဒီ ရုံးကနေ အမှု့ကိစ္စတွေ ပြီးပြတ်ခဲ့တာနဲ့အမျှ ကျောင်းကိုအပြန်၊ လမ်းခရီးမှာဘဲ ဒီသစ္စာရေနဲ့ပတ်သတ်လို့ ခေါ်ယူ အစစ်ဆေးခံရတဲ့ ဘာသာဝင်တွေကို တွေ့ ရှိခဲ့ရပြန်တယ်။ ကျွန်ုပ်လဲ သူတို့မှာရှိတဲ့ ဘာသာရေးဝတ္တရားတွေ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို ဘာသာရေးအရ ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တယ်။ ကျောင်းမှာ ကျန်ရှိနေခဲ့ကြတဲ့ သူတွေကလည်း ကျွန်ုပ်ကို ပြန်တွေ့ ကြတော့မှာပဲ စိတ်အေးကြတော့တယ်။ သူတို့တွေကလည်း ကျွန်ုပ်ထွက်သွားကတဲက ပြန်မလာမချင်း ကျွန်ုပ်အတွက် စိတ်ပူပန် သောကတွေ ရောက်နေခဲ့ကြတာကိုး။
ဆရာတော်ဂါလိဇီးယားလည်း နန်းတွင်းက နာရီကြီးက ပျက်တယ်ဆိုတာနဲ့ နန်းတွင်းကို သွားပြီး နာရီကြီးကို ပြင်ပေးခဲ့ရသေးပါတယ်။ အဲဒီ တစ်ခေါက်မှာဘဲ သမိန်ထောမင်းက သူ့အတွက် အကူအညီတစ်ခုလောက်တော့ ဆောင်ရွက်ပေးပါအုံးလို့ ဆရာတော်ဘုရားကို တောင်းခံခဲ့ပါသေးတယ်။ ကိုရိုမွန်ဒါ (အန္ဒိယပြည်) ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ ပြင်သစ်ပိုင် ပွန်ဒါချယ်ရီမြို့ကို ဘုရင့်ကိုယ်စား စာရေးဆက်သွယ်ပေးဖို့ တောင်းခံ ခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်။ ပဲခူးနိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေ ငြိမ်သက်နေတုန်းမှာ ပွန်ဒါချယ်ရီမြို့ စားအနေနဲ့ မြန်မာပြည် ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ သင်္ဘောတွေချထားပေးဘို့ အကြောင်းကြားစာကို ရေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ ဆရာတော်ဘုရားလည်း ဘုရင်တောင်းခံတဲ့အတိုင်းပဲ စာတွေကို ရေးပေးခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ဆရာတော်ဘုရားက ဘုရင်မင်းမြတ်ထံ အကူအညီတခု တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား နှစ်ဦးကို ပြည်ပနိုင်ငံကိုသွားဘို့ အခွင့်ပန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ဘုရင်ဆိုတာ သက်ဦးဆံပိုင် အာဏာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ဘုရင့် အခွင့်မရဘူးဆိုရင် မည်သည့် တိုင်းရင်းသားမျှ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ထွက်ခွာခွင့်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဆရာတော် ဘုရားရဲ့ တောင်းခံချက်ဟာ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ဆရာတော် ဘုရားတောင်းခံချက်ကိုလည်း ဘုရင်မင်းမြတ်ဟာ ငြင်းပယ်မှု့မရှိ အားလုံးကို ရှောရှောရှူရှူ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
နန်းတွင်း ကိစ္စတွေပြီးတာနဲ့ပဲ၊ ဆရာတော်ဘုရားဟာ ပဲခူးမြို့မှာပဲ နောက်ထပ်(၈) ရက်တာမျှ ဆက်လက် သီတင်းသုံးခဲ့ပါတယ်။ ပဲခူးမှာရှိတဲ့ ဘာသာဝင်တွေကို ခရစ္စမားအားပေးခြင်း စက္ကရမင်တူးပေးစရာ အစီအစဉ်တွေ ရှိနေလို့ပါ။ ဒါ့အပြင် နန်းတွေက နာရီကြီးက ပြန်ပြီးဖောက်ပြန် တယ်ဆိုတာနဲ့ ဆရာတော်ဘုရားဟာ နန်းတွင်းကို နောက်တဖန် ပြန်သွားခဲ့ရသေးပါတယ်။ ဘုရင်မင်းမြတ်ဟာ ပညာရေးဘက်မှာလည်း အထူး စိတ်ဝင်စားမှု့ တွေရှိတယ်။ ဒီတခေါက်ကျတော့ ဆရာတော်ဘုရားဟာ နာရီပြင်ဘို့အသွားမှာ ဘုရင်မင်းမြတ်နဲ့ ပညာရေးကိစ္စတွေကို (၃) နာရီကြာမျှ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စတွေ ပြီးတော့မှပဲ ဆရာတော်ဘုရားဟာ သန်လျင်မြို့ကို ကြွရောက်လာခဲ့တယ်။ အခု ရေးပို့လိုက်တဲ့ သတင်းတွေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၃) လပိုင်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သတင်းဖြစ်ရပ်တွေပဲ ဆိုကြပါစို့။ ဒါပေမဲ့ သာသနာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ မရေးရသေးပါလား။
အခုတလောမှာ အပိုအလုပ်တွေက အတော်ကို များနေတယ်။ ဘာသာပျက်သွားတဲ့ သူတွေကို ပြန်လည် စည်းရုံးနေရတယ်။ အချို့ လဲပြန်ပြီး ၀င်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အခြားဘာသာကနေ ၀င်လာတဲ့သူတွေလဲ အချို့ ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်လဲ ဒေသခံ ဘာသာစကားကို ပြောတတ်နေပါပြီ။ ဒီအတောအတွင်းမှာ ယောက်ျားကလေးတစ်စုဟာ ကျွန်ုပ်နဲ့ဘာသာရေး လေ့လာနေကြတယ်။ သူတို့အထဲက အကြီး (၁၄) ယောက်ကိုတော့ ဆေးကြောခြင်း ပေးပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စဟာ ဘာမှ မပြောပလောက်ပါဘူး။ ဘာသာမရှိသေးတဲ့ သူတွေ၊ ဘာသာပျက်သွားတဲ့ သူတွေ၊ အာမေးနီးယန်း လူမျိုးတွေ၊ အင်္ဂလိပ်တွေ၊ ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတွေ၊ ဒီလူတွေကို အများကြီးလုပ်ပေးစရာ ရှိနေပါသေး တယ်။ အဲဒီအထဲက နတ်ကိုးကွယ်နေတဲ့ လူတွေကို တွေ့ ရပြန်တော့လဲ ပိုလို့သာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ဘာသာ ၀င်တွေကို စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲ၊ ဘာသာရေးဘက်မှာ အတော်လေးကို ပေါ့ဆနေကြတာကို တွေ့ ရှိရတယ်။ သူတို့ကို စံပြ ဘာသာဝင်တွေရယ်လိုတော့ သတ်မှတ်လို့ မရနိုင်သေးပါဘူး။ အချို့ ဟာ ဘာသာထဲကို ၀င်လာတာ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သော်လည်း မစ္ဆားနာယူရမှန်းကိုမှ မသိသေးသလောက် ဖြစ်နေကြတယ်။ အချို့ကျပြန်တော့လဲ အာပတ်ဖြေတာကို သိပ်ပြီး မတွေ့ ရဘူး။ ကောင်းကင်ဘုံမေတ္တာတို့၊ ယုံကြည်ခြင်းမေတ္တာတို့ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိကြသေးသလောက် အသိတရား နည်းပါးနေတာကို တွေ့ မြင်ရတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့ အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ ခရစ်စတူး အမှတ်အသားကိုတောင် မလုပ်တတ်ကြဘူး။ အမှန်တကယ်တော့ သူတို့ဟာ ဆေးကြောခြင်း စက္ကရမင်တူးကို ခံယူထားပြီး သူတွေဖြစ်ကြတယ် မဟုတ်လား။ ဒီလိုဆိုတော့ ခရစ်ယာန် ဖြစ်ကြပေမဲ့ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ အခြေခံ သဘောတရားတွေကိုတော့ သိသင့်ကြပါတယ်။ ဥရောပတိုက်မှာ ကတော့ ဒီလောက် ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ဘယ်တွေ့ ရပါ့မလဲ။ ဒီမှာ တခုကတော့ ချွင်းချက်ပြုကြရမှာပဲ။ အဲဒါက ပတ်ဝန်းကျင် မတူညီမှု့ပေါ့။ ဒီအရပ်ဒေသမှာရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လောကနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ ဥရောပတိုက်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင် လောကတွေက တူကြတာမှ မဟုတ်တာ။ ကွာခြားမှု့တွေက များလွန်းလှပါတယ်။ ဒုစရိုက်ဆိုတာ ရှိမှန်းတောင် မသိကြသယောင် ဖြစ်နေတယ်။ တခါတလေကျတော့လဲ ကျွန်ုပ်ဟာ ဘာသာတူတွေ အပေါ်ခတ်ကြမ်းကြမ်း အုပ်ချုပ်ပြောဆို ဆုံးမ ပေးရတယ်။ အာဏာ သုံးရတာပေါ့။ အခုတော့ တော်သေးရဲ့၊ ဒီမှာရှိတဲ့ ဘုရင်တွေက ကျွန်ုပ်တို့ အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်း အပေါ် ကန့်ကွက်မှု့ လုံးဝ မရှိဘူး။ အေးလေ၊ ဒီလို အာဏာကို အသုံးပြုတဲ့အခါ ကောင်းကျိုးလေးတွေ ပြုတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာဏာဆိုတာ ကလည်း တချိန်လုံး သုံးနေလို့လဲ မပြီးသေးဘူး။ အာဏာကို သိပ်ပြီး သုံးပြန်တော့လဲ ဘာသာကို စွန့်ခွာသွားကြမှာ စိုးရိမ်ရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ စစ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်းကာလမှာ အလုပ်ကို အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်တော့မယ်လို့ ရည်မှန်းထားခဲ့တာပဲ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇုးတော်နဲ့ဆိုရင် တနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းတွေ အတော်လေးကို အောင်မြင်နိုင်စရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှော်မှန်းထား သလောက်တော့ ဖြစ်ပေါ် မလာခဲ့ဘူး။ တစ်နှစ်သာ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ မျှော်မှန်းတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက စီမံကိန်း ထက်ဝက်လောက်ဘဲ ပြီးနိုင်ခဲ့တယ်။ အခု လတ်တလော တွေ့ ကြုံနေရတဲ့ ပြသနာက ဘာသာထဲကို နောက်ထပ်ဝင်လိုတဲ့ သူတွေအတွက် အဟန့်အတားတွေ ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်။ အဲဒါကတော့ ဘာသာပျက်တွေရဲ့ မကောင်းတဲ့ နမူနာတွေပေ့ါ။ သူတို့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေက ဘာသာထဲကို ၀င်လိုတဲ့သူတွေ အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ အခုကျွန်ုပ်တို့ အပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သာသနာ လယ်ကွင်း ပြင်ကြီးကို တနေ့ကျတော့ အားရမှု့အပြည့်အ၀နဲ့ ရိတ်သိမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆိုတဲ့ ဆုကို ကျွန်ုပ်ကော၊ ဘာသာဝင်တွေကော နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ တောင်းခံနေကြရတယ်။ ဒီတိုင်းပြည် အတွင်းမှာ ကိုယ်တော်ရဲ့ တရားတော် ထွန်းကားပြီး၊ နတ်ဆိုးရဲ့ ဒုစရိုက်ကျင့်ထုံးတွေ ချုပ်ငြိမ်းသွားဘို့ ဆုတောင်းမေတ္တာ အမြဲ ပို့သနေရပါတယ်။ ဒီမှာ နတ်ဆိုးဟာ ဘုရားထက်တောင် အားကိုးမှု့ခံစားနေရပါတယ်။ လူတွေဟာ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါဝေဒနာ ခံစားရပြီဆိုရင် မကောင်းဆိုးဝါး နတ်တွေကိုပဲ ပူဇော် ပသလေ့ရှိကြတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဒီအရပ်ဒေသမှာ သင်္ကန်း၊ ဘီရက်တာ(ရှေးခေတ်က ရိုမင်ကက်သလစ် ဘုန်းတော်ကြီးများ ဆောင်းသော ဦးထုပ်အနက်) နဲ့ ရိုမင်ကော်လာကိုဘဲ ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်လည်း ဥရောပကထွက်လာတဲ့ နေ့ကစပြီး အသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ ချုံထည်တို့၊ ခြေစွပ်အရှည်ကြီးတွေတို့ကို အန္ဒိယပြည်ကို ရောက်ကတည်းက အသုံးမပြုတော့ဘဲ ချွတ်လိုက်ရတယ်။ ဦးထုပ်ဆိုတာကိုလည်း ပဲခူးရောက်ကတည်းက မသုံးတော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီအရပ်ဒေသမှာ သူဌေးသူကြွယ်တွေသာ ဦးထုပ်ကို အပိုပစ္စည်းတစ်ခု အဖြစ် အသုံးပြုတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ နောက်ပြီး ဒီမှာ ခြေနင်းရှားတော့ သစ်သားနဲ့လုပ်တဲ့ဖိနပ် (ခုံဖိနပ်) ကိုဘဲ အသုံးပြုတယ်။ အိပ်ယာခင်း ဆိုတာလည်း မသိတော့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့တွေထဲက အချို့ဆိုရင်လည်း လမ်းခရီးမှာပဲ သူတို့ရဲ့ အိပ်ယာလိပ်တွေ ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်။ အချို့ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ စစ်အတွင်းက ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်။ တကယ်မှာတော့ ဒီက မင်းညီ မင်းသားတွေတောင်မှပဲ အိပ်ယာခင်းဆိုတာ အသုံးမပြုကြပါဘူး။ ဒီမှာဆို ဖျာတစ်ချပ်ရှိရင် ကိစ္စ ပြီးနေတာပါပဲ။ ပေါင်မုန့်နဲ့ စပျစ်ရည်တွေကလဲ ဘာမှန်းတောင် မသိတော့သလောက် ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ ပေါင်မုန့်အစား ဆန်ကို ချက်ပြုတ်ပြီး စားကြတယ်။ စပျစ်ရည် အတွက်ကတော့ ရာသီအလိုက်သီးတဲ့ နဲနဲချဉ်တဲ့ အသီးတခုခုကို အရည်ညှစ်ပြီး၊ ရိုးရိုးရေထဲကို ရောထည့်လိုက်ရင် ပြီးသွားတာပါပဲ။
ဂျုံမှု့န့်ကလဲ ပွန်ဒါချယ်ရီမြို့က သယ်ဆောင်ယူလာတဲ့ အတိုင်း အတာ လောက်ပဲရှိတယ်။ ဒီရှိတာလေးကိုတောင် ကိုယ်တော်မြတ်လုပ်ဘို့ သိမ်းထားရပါတယ်။ မစ္ဆားတရားအတွက် စပျစ်ရည်တောင် မနဲ ချွေတာပြီး သုံးနေကြရတယ်။ ပုလင်းသေးသေးကလေးကို တစ်လလောက် ခံအောင် ဂရုစိုက်ပြီး သုံးနေရတယ်။ ရက်သတ္တပတ်အတွင်း မစ္ဆားကို တစ်ရက်ခြား ဟောနေရတယ်။ ကိုရိုမွန်ဒါ ကမ်းခြေကနေ နောက်ထပ်သာ စပျစ်ရည် ရောက်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင် ပွဲနေ့ကြီးတွေတောင်မှပဲ မစ္ဆား ဟောနိုင်မယ် မထင်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်ကတော့ ပစ်ထားမယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။ ဒီလို အရေးကြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မပြောနဲ့ အခြားပစ္စည်းတွေတောင်မှပဲ အချိန်တန်ရင် ရောက်လာခဲ့တာပါပဲ။ အခုလို ရေးလိုက်လို့လဲ ဒီမှာ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ဓါတ်တွေ ကျဆင်းနေပြီလို့လဲ မထင်လိုက်နဲ့အုံး။ ကျွန်ုပ်တို့လဲ မသေနိုင်လောက် သေးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးက ပြောမရလောက်အောင်ကို ကောင်းမွန်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဆရာတော်ဘုရား တပါးတည်းပဲ တခါတလေ အစာမကျေတတ်တဲ့ ရောဂါကလေး ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာ သူ့ရောဂါကို ကူသထုံးကတော့ စပျစ်ရည်ကလေး နဲနဲသောက်ချလိုက်တာပဲ။ ရောဂါလဲ ပျောက်သွားတာပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ ဆရာတော်ဘုရားကို ဘုရားသခင် အသက်ရှည် အောင်ထားပါစေအုံး။ သူဟာ ဘုရင်မင်းမြတ်နဲ့ ရင်းနှီးမှုရှိတာတို့၊ သာသနာကြီးအတွက် အတိုင်းအစမရှိ တန်ဖိုးရှိတာတို့၊ နောက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးက ဘယ်လောက် အားကိုး အားထားပြုကြရတယ်ဆိုတာတွေကတော့ ဘုရားသခင်ပဲ အသိဆုံးဖြစ်မယ်။
ဆရာတော် ပီးယို ဂါလိဇီးယား
မြန်မာပြည်ရောက်ခုနှစ်။ ။ ၁၇၂၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၃ ရက်၊ အင်းဝ
မြန်မာပြည်အတွက် ရောမမြို့တွင် သက္ကရာဇ် ၁၇၄၀ က ပထမဆုံးသော ဆရာတော် ဘိသိတ် ခံယူရရှိသူဖြစ်သည်။
ပျံလွန်တော်မူသောရက်။ ။ ၁၇၄၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ပဲခူး-သန်လျင်လမ်း၊
သက္ကရာဇ် ၁၇၃၀ ခုနှစ်တွင်၊ ရောမမြို့ ၊ သာသနာပိုင်ပြန့်ပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ်ကြီးသည် သာသနာရေး အကြပ်အတည်းတရပ် နှင့်တွေ့ ကြုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဥရောပတိုက်တစ်ခွင်တွင် သာသနာ့အမှု့ဆောင်များဖြစ်ကြသော ရဟန်းဘုန်းတော်ကြီးများ ဦးရေ ကျဆင်း ခဲ့သော အကြပ်အတည်းဖြစ်သည်။ ရဟန်းဘုန်းတော်ကြီးများ ရှားပါးမှု့ အခက်အခဲကို ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးရန် မိမိဌာနချုပ် လက်အောက်ရှိ အဝေးရောက် ဘုန်းတော်ကြီးများကိုပင် ဥရောပတိုက်သို့ ပြန်လည် စုစည်းပေးခဲ့ရသည်။ သို့ ဖြစ်၍ အဝေးနယ်မြေများသို့ သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များ စေလွှတ်ပေးရေးသည် မည်သို့မျှ စဉ်းစား၍ မရနိုင်သော အခက်အခဲတစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
အင်းဝနေပြည်တော်၏ ကက်သလခ်သာသနာပိုင် ဘုန်းတော်ကြီး ဂျော့ ရိုဇက်တီ (Rev.Fr. George Rosetti) သည်လည်း မိမိဌာနချုပ်၏ ပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းကို ခံရသဖြင့် မိမိသာသနာနယ်မြေသစ်ကို ကျောခိုင်း၍ ဥရောပတိုက်သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့ ရသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး ဂျော့ရိုဇက်တီ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်၊ မြန်မာပြည် သာသနာနယ်မြေ၌ ဘားရ်နားဘိုက်ဂိုဏ်းဝင် ဘုန်းတော်ကြီး ဂါလိဇီးယားတစ်ပါးတည်းသာလျှင် ကျန်ရှိခဲ့သည်။ သို့ ဖြစ်၍ ဘုန်းတော်ကြီး ဂါလိဇီယားသည် မိမိ တာဝန်ကျရာ အောက်မြန်မာပြည်သာသနာကိုသာလျင်မက၊ အထက်မြန်မာပြည်သာသနာရှိ တာဝန်များကိုပါ ဆက်လက် တိုးချဲ့ ထမ်းရွက်ပေးရသည်။ သို့ သော် အလွန်ကျယ်ပြန့်လှသော သာသနာနယ်မြေများ၏ တာဝန် ၀တ္တရားများကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ပေးနိုင်စွမ်း မရှိတော့သဖြင့်၊ သာသနာ့အမှု့ဆောင် ကိစ္စအ၀၀တို့ကို အထက်အကြီးအကဲများအား တင်ပြ ဆွေးနွေး အစီရင်ခံနိုင်ရန်အတွက် မိမိကိုယ်တိုင်ပင် ရောမမြို့သို့ ခရီးထွက်ခွာခဲ့သည်။
ဘုန်းတော်ကြီး ဂါလိဇီယားအတွက် ရောမမြို့မှ စောင့်ကြိုနေသော သတင်းဖြစ်ရပ်သည် ဆီမီးကုန်ခမ်းသူတစ်ဦးအား မီးစာကိုပါ မကျန် အဖြုတ်ခံရသူနှင့် အလားဖြစ်
ခဲ့ရသည်။ ရောမမြို့ သာသနာပြန့်ပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာနချုပ်၏ မြန်မာပြည်ရှိ သာသနာနယ်မြေအတွက် အထူး ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို တွေ့ ရှိခဲ့သည်။ ဥရောပတိုက်တစ်ခွင်တွင် ရဟန်းဘုန်းတော်ကြီးများ ရှားပါးမှု့ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေသေးသဖြင့် သာသနာပြန့်ပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာနချုပ်သည် အဆိုပါ အခက်အခဲပြသနာရပ်နှင့် ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ သာသနာနယ်မြေသစ်များသို့ သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်သစ်များကို မည်သို့မျှ ဆက်လက် စေလွှတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့ ပါ၍ မိမိ ဌာနချုပ်လက်အောက်ရှိ တိုးချဲ့ သာသနာနယ်မြေသစ်များကို ခေတ္တ ယာယီ ပိတ်ပင်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းများကို ထုတ်ပြန် ကြေညာထားလေသည်။ ထိုပြင် ၁၇၂၇ ခုနှစ် ရောမမြို့ ၏ မြန်မာပြည်အတွက် ထုတ်ပြန်ကြေညာသော သာသနာနယ် မြေခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းနှင့်၊ မြန်မာပြည်ရှိ ကက်သလခ်သာသနာတခုလုံးကို ယင်းနယ်မြေတွင် လတ်တလော၌ သာသနာအမှု့ တော် ထမ်းရွက်နေကြသည့် ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်းဝင် ဘုန်းတော်ကြီးများ လက်ဝယ်သို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ အားလုံးကို အပ်နှင်းလိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာထားသည်ကို တွေ့ ရှိရလေသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာပြည်မှ ရောမမြ်ို့ သို့ ရောက်ရှိနေသော ဘုန်းတော်ကြီး ဂါလိဇီယားကိုလည်း မြန်မာပြည် ကက်သလခ်သာသနာတော်၏ အကြီးအကဲမှုး ဆရာတော်အဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပေးလိုက်ကြောင်း ဗာတီကန်ကျောင်းတော်၏ ကြေညာစာတမ်း၌ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
သက္ကရာဇ် ၁၇၄၀ ခုနှစ်တွင်၊ ဘုန်းတော်ကြီး ဂါလိဇီယားသည် အီတလီပြည်၊ ရောမမြို့မှာပင် ကက်သလခ်ဆရာတော် ဘိတ်သိတ် မင်္ဂလာ ခံယူခဲ့လေသည်။ ဤသို့ ဖြင့် မြန်မာပြည် ကက်သလခ်သာသနာ သမိုင်းတလျောက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီး ဂါလိဇီယားသည် ပထမဆုံးသော ဆရာတော် သိက္ခာတော်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအဖြစ် သမိုင်း မှတ်တမ်းတင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဆရာတော်တစ်ပါးကို မြန်မာပြည် အနေဖြင့် လက်ခံရရှိလိုက်ခြင်းဖြင့် သာသနာလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ပိုမို ရရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာပြည်ရှိ ကက်သလခ် သာသနာတော်အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူ ၀င့်ကြွားဖွယ်ရာ ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။ အီတလီပြည်၊ မီလန်းမြို့ရှိ ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်းကြီး မှလည်း မိမိတို့ အသင်းသား ဆရာတော်သစ် ဂါလိဇီးယားအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ပံ့ပိုး ကူညီမှု့တစ်ရပ်ကို လက်ဆောင်မွန်အဖြစ် ချီးမြှင့်ခဲ့လေသည်။ ယင်းလက်ဆောင်မွန်မှာ ဆရာတော်သစ်အနေဖြင့် မိမိ သာသနာနယ်မြေတွင် သာသနာလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် ရည်မှတ်၍ ဘားရ်နားဘိုက်အသင်းဂိုဏ်းဝင် အောက်ပါ (၄) ပါး စေလွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၁။ ဘုန်းတော်ကြီး ပေါလို မာရီ နယ်ရီးနီ၊
Rev.Fr.Paolo Marie Nerini
၂။ ဘုန်းတော်ကြီး အာလက်ဇန်းဒရို မွန်ဒယ်လီ၊
Rev.Fr. Allesandro Mondelli
၃။ ဘုန်းတော်ကြီး ဂျွန်အန်းနက်စ် ဒယ်လ် ကွန်းတေ၊
Rev.Fr. Joannes Del Conte
၄။ ကိုရင်ကြီး အန်ဂျေလို ကာပဲလို
Rev. Brother Angelo Capello တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ဆရာတော် ဂါလိဇီးယား နှင့်အဖွဲ့မြန်မာပြည်သို့ ထွက်ခွာလာခဲ့ခြင်း
သက္ကရာဇ် ၁၇၄၁ ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်ဂါလိဇီးယားသည် အီတလီပြည်မှ မြန်မာပြည်သို့ သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်(၄)ပါးနှင့်အတူ တကွ ထွက်ခွာခဲ့သည်။ ဆရာတော်ဂါလိဇီးယား ပြည်ပသို့ ခရီးထွက်ခိုက် မြန်မာပြည်၌ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတော်တော်များများ ပြောင်းလဲလာခဲ့ သည်။ သက္ကရာဇ် ၁၇၃၈ ခုနှစ်တွင် ပြည်ပရန်များဖြစ်ကြသော မဏိပူရ ကသဲလိုမျိုးတို့သည် အထက်မြန်မာပြည် အင်းဝနေပြည်တော်ကို ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အင်းဝ ဘုရင်မင်းမြတ်သည် ပြည်ပ ရန်စွယ်ကိုသာလျှင် မဟုတ်၊ ပြည်တွင်း၌ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော ထကြွမှု့များကိုလည်း နှိမ်နှင်းပေးနေရသည်။ ကွေ့ ရှမ်းတို့သည် မတ္တရာနယ်တစ်ဝိုက်ရှိ နယ်မြေများကို စည်းရုံးခါ၊ အင်းဝဘုရင် အုပ်ချုပ်ရေး လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြလေသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် အောက်မြန်မာပြည်ရှိ မွန်တို့ကလည်း သန်လျင်၊ မုတ္တမနှင့် တောင်ငူ အစရှိသည်တို့ကို တိုက်ခိုက် သိမ်းယူခဲ့ကြပြီး၊ သမိန်ထော ဗုဒ္ဓကေသီကို ဘုရင် တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ ပဲခူးမြို့ကို မွန်ဘုရင် ထီးနန်းစိုက်ထူရာ မြို့တော်အဖြစ် ထူထောင်လိုက်ကြပြီး၊ အင်းဝကို တော်လှန်ခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ အင်းဝဘုရင်သည် ပြည်တွင်း ပြည်ပရန်ဆွယ်များ၊ တော်လှန်မှု့များကို တချိန်တည်းမှာပင် စုစည်း ခံနေရချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသို့ သော နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကို ကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်စွမ်း မရှိသောကြောင့်၊ အင်းဝနေပြည်တော်၏ တန်ခိုးသည်လည်း တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်စ ပြုခဲ့တော့သည်။
အီတလီပြည်မှ ထွက်ခွာခဲ့ကြသော သာသနာပြုအဖွဲ့ သည် သက္ကရာဇ် ၁၇၄၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် မြန်မာပြည်၊ သန်လျင်ဆိပ်ကမ်းမြို့သို့ ဆိုက်ရောက် လာခဲ့ကြသည်။ မြန်မာပြည် ကက်သလခ်သမိုင်းစဉ်၌ အဖွဲ့ အစည်း အလုံးအရင်းနှင့် ပထမအကြိမ်မြောက် ရောက်ရှိလာကြသော ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းဂိုဏ်းဝင်များဖြစ်ကြသည်။
ဆရာတော် ဂါလာဇီးယားသည် မြန်မာပြည်တပြည်လုံး၏ သာသနာဦးစီးမှုး ဖြစ်သော်လည်း၊ မိမိရောက်ရှိလာသော မြန်မာပြည်သည် နိုင်ငံရေးအရ စည်းလုံးမှု့ အင်အား နည်းပါး ချို့ ယွင်းနေသောကြောင့် ရောက်လျှင် ရောက်ခြင်း အခက်အခဲများစွာနှင့် တွေ့ ဆုံ ရင်ဆိုင်ခဲ့ ရသည်။
ဆရာတော်နှင့်အဖွဲ့သည် ရှေးဦးစွာ ပထမ အောက်မြန်မာပြည်ရှိ ပဲခူးမြို့ နန်းစံရာ ပဲခူးဘုရင် သမိန်ထော ဗုဒ္ဓကေသီနှင့် တွေ့ ဆုံခဲ့သည်။ ဆရာတော် ဂါလိဇီးယားသည် အီတလီပြည်မှ မိမိ သယ်ဆောင်ယူလာခဲ့သော ခြေရှည် တိုင်ထောင်နာရီကြီး တစ်လုံးကို ပဲခူးဘုရင်အား
လက်ဆောင်မွန်အဖြစ် ဆက်ကပ်ခဲ့သည်။ ထိုနာရီကြီး၏ မျက်နှာပြင်ရှိ ဂဏန်းအက္ခရာ စာလုံးများကိုလည်း ဆရာတော် ဂါလိဇီးယား ကိုယ်တိုင် ကြပ်မတ်ပြီး မြန်မာအက္ခရာ ဂဏာန်းစာလုံးများဖြင့် ရေးသား ထိုးမှတ်ထားသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဆိုရသော် အဆိုပါ နာရီကြီးသည် မြန်မာ့စက်နာရီသမိုင်းတွင် တခန်းတဏ္ဍမှ အလွန်ပြောင်မြောက်သော စက္ကန့် နာရီကြီးတစ်လုံး ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ အကြောင်းရှိသည်ဟု ဆိုရပေမည်။
ပဲခူးဘုရင်သည်လည်း မိမိ လာရောက်တွေ့ ဆုံ ဂါရ၀ပြုနှုတ်ဆက်သည့် ဆရာတော်ဂါလိဇီးယားနှင့် သာသနာပြုအဖွဲ့ တို့အား ၀မ်းမြောက် ကြည်ဖြုစွာ ကြိုဆိုလက်ခံခဲ့သည်။ သာသနာပြုအဖွဲ့ တို့အားလည်း မိမိနယ်ပယ်၌ သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပ်နှင်းပေးခဲ့သည်။ ပဲခူးမြို့တော်မှာပင် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် ရဟန်း ဘုန်းတော်ကြီးများ သီတင်းသုံး နေထိုင်ရန် ကျောင်းသင်္ခမ်းဆောင် တစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် မြေနေရာများကို ချမှတ်ပေးခဲ့လေသည်။
မြန်မာပြည်ရောက် ဆရာတော်ဂါလိဇီးယားသည် သာသနာလုပ်ငန်းများကို အဆောတလျင် စတင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ ပဲခူးမြို့ကို သာသနာ ဗဟိုရ်ဌာနချုပ်အဖြစ် ရွေးချယ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဆောင်နှင့် ဆရာတော်ကျောင်းတိုက်များကို တစ်ချိန် တည်းမှာပင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး အာလက်ဇန်းဒရို မွန်ဒယ်လီ (Rev.Fr. Allesandro Mondelli) နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး ဂျွန်အန်းနက်စ် ဒယ်လ် ကွန်းတေ (Rev.Fr. Joannes Del Conte) တို့ကို ပဲခူးမြို့ရှိ သာသနာလုပ်ငန်းများအတွက် တာဝန်များထမ်းရွက် စေခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး ပေါလို မာရီ နယ်ရီးနီ (Rev.Fr.Paolo Marie Nerini) ကိုမူ ကိုရင်ကြီး အန်ဂျေလို ကာပဲလို(Rev. Brother Angelo Capello) နှင့်အတူသန်လျင်မြို့သို့ စေလွှတ်၍ သန်လျင်မြို့တွင် သာသနာလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူထမ်းရွက်စေခဲ့သည်။
အထက်မြန်မာပြည်၊ အင်းဝတွင် နိုင်ငံရေးအခြေအနေများ အေးချမ်းသာယာမှု့ အပြည့်အ၀မရှိသေးသဖြင့် ဆရာတော်ဂါလိဇီးယားသည် အထက်မြန်မာပြည်ရှိ ကက်သလခ် သာသနာလုပ်ငန်းများကို ခေတ္တ ဆိုင်းငံ့ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရသည်။
သန်လျင်မြို့သို့ ရောက်ရှိသွားကြသော ဘုန်းတော်ကြီး ပေါလို မာရီ နယ်ရီးနီ (Rev.Fr.Paolo Marie Nerini) နှင့် ကိုရင်ကြီး အန်ဂျေလို ကာပဲလို(Rev. Brother Angelo Capello) တို့အား ပျက်စီး ယိုယွင်းနေသော ကျောင်းဆောင်များက ဆီးကြိုလျက်ရှိသည်ကို တွေ့့မြင်ကြ ရသည်။ သို့ ဖြစ်၍ ယင်းသာသနာကိုလည်း အသစ်တဖန် ပြန်လည် ပြုပြင် မွမ်းမံ တည်ဆောက်ပေးခဲ့ကြရသည်။ သာသနာ၏ အဆောက်အအုံများကိုသာမက၊ သိုးထိန်း မရှိခဲ့သောကြောင့် သိုးအုပ်စုသည်လည်း ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ခါ ပျောက်ဆုံးသူများက ပျောက်ဆုံး နေကြ၊ ကျန်ရှိသူများကလည်း အကွဲကွဲအပြားပြား ဖြစ်နေကြသဖြင့် သာသနာဝင် အုပ်စုတစ်စုလုံးကို ပြန်လည် စုစည်းပေးကြရသည်။ သာသနာတော်အား ပြုစု ပျိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို အောက်ခြေမှ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြရသည်။
သက္ကရာဇ် ၁၇၄၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အလွန် အေးချမ်းသာယာလျက်ရှိသော သန်လျင်မြို့ကလေး၏ ညနေပိုင်းအချိန်ကို ရုတ်ခြည်း ပြောင်းလဲပေးလိုက်သည့် အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်။ သန်လျင်မြို့ရှိ “ဆီညော်ကိုနီုဗီ” အမည်တွင်သည့် ရပ်ကွက်မှ စတင် ထွက်ပေါ်လာသည့် မီးတောက်မီးလျံများသည် တမြို့လုံးကို သိမ့်သိမ့်တုန်အောင် ခြောက်ခြား သွားစေခဲ့သည်။ ထိုမီးကြီးကား မီးလုံး မီးလျံများအဖြစ်သို့ တစတစဖြင့် ပိုမို ကြီးမား အားထွားလာခါ၊ တမြို့လုံးကို ၀ါးမျိုပစ်လိုက်ခဲ့သည်။ ပိုမို၍ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာရ သည်မှာ ယင်းမီးတောက် မီးလျံများအကြားမှ စစ်ကြွေးကြော်သံများပင် ဖြစ်သည်။ အင်းဝမှ ရောက်ရှိလာကြသော စစ်သည်တို့သည် မီးသူရဲများ ပမာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြပြီး သန်လျင်တစ်မြို့လုံးကို စီးခဲ့သည်။ ပြန်လည် ခုခံတိုက်ခိုက်ကြသော မွန်စစ်သည်တို့၏ အလောင်းများမှာလည်း နေရာနှင့်အနှံ့တွင် တွေ့ မြင် နိုင်ပေသည်။ သန်လျင်မြို့ရှိ ဖြစ်ပွားနေသော သတင်းများ ပဲခူးမြို့ သို့ ရောက်ရှိသွားသောအခါ၊ စစ်ကူများ မကြာမီ အချိန်ပိုင်းမှာပင် သန်လျင်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ ဤအချိန်တွင် တိုက်ပွဲများမှာ ပိုမိုပင် ပြင်းထန်လာခဲ့သည်။
သန်လျင်မြို့ကား ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပေါ်လျက်၊ မြို့သူမြို့သားတို့သည်လည်း မိမိတို့ အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွာ၍ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ကြ ရသည်။ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ကြသော စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များကလည်း မနည်းလှပေ။ ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီကျောင်းဝင်း တစ်ခုလုံးသည်လည်း နေ့ချင်း ညချင်းလိုပင် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ ခိုကိုးရာဂေဟာအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီသည်လည်း မိမိ ကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ ပြေးဝင်လာသမျှ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကို ဆီးကြိုလျက် နေရာထိုင်ခင်းများကို စီစဉ်ပေးခါ လုံခြုံမှု့ကို ပေးခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး၏ လက်ထောက် ကိုရင်ကြီး အန်ဂျေလိုသည်လည်း ဆေးဘက်ပညာ တတ်ကျွမ်းသူတစ်ဦး ဖြစ်သည့် အလျောက် မီးဒဏ်၊ စစ်ဘေးဒဏ်မှ အနာတရ ဖြစ်လာကြသော ဒုက္ခသည်များကို ဆေးဝါး ကုသပေးခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံးတွင် ပဲခူးမှ ရောက်ရှိလာသော စစ်ကူအားဖြင့် မွန်တို့ဘက်မှ စစ်ရေး အသာရရှိသွားခဲ့သည်။ သန်လျင်မြို့သည် မွန်တို့လက်အောက်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သော သတင်းကို ကြားလျှင်ကြားခြင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီသည် ပဲခူးမြို့ရှိ သမိန်ထော ဗုဒ္ဓကေသီထံသို့ ၀င်ရောက်၍ သန်လျင်မြို့ပေါ်ရှိ ပြည်သူများ အေးချမ်းသာယာစွာ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် အဆောတလျင် ကူညီ စီမံဆောင်ရွက်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ဤမွန်မြန်မာ စစ်ပွဲပြီးဆုံးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော သာသနာအခြေအနေများကို သုံးသပ်နိုင်ရန်နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီ၏ စိတ်နေသဘောထားများနှင့် စစ်ဘေးအတွေ့ အကြုံများကို အနီးကပ်လေ့လာနိုင်ရေး အတွက်၊ အီတလီပြည်ရှိ မိမိအစ်ကိုဖြစ်သူ မစ္စတာ ပီတာ အမ်ဘရို့စ် ထံသို့ ဘုန်းတော်ကြီး နယ်ရီးနီ ကိုယ်တိုင်ရေးသား ပေးပို့သည့် စာကို တင်ပြလိုက်ရသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 8:56 PM